शहर यात्रा र दर्शनीय स्थल संग स्थानांतरण सेवा बासेल -
शहर यात्रा र दर्शनीय स्थलों संग स्थानांतरण सेवा बेसल
न केवल हाम्रो व्यापार क्लाइन्टहरू - पनि परिवार र समूहहरू7व्यक्तिहरूमा मात्र - हामी हाम्रा मध्ये एकमा एक आरामदायक यात्राको संभावना प्रस्ताव गर्दछौं। क्लासिक र सुरुचिपूर्ण लिमोजिन्स मा।
विशेष गरी गर्मीको महिनामा, बासेलले धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ जुन स्विट्जरल्याण्ड, फ्रान्स र जर्मनीमा वरपरका शहरहरू पत्ता लगाउन चाहान्छ। हाम्रो उत्कृष्ट स्थानको कारणले हामी तपाईंको शहरको यात्रालाई सम्भव छ यथासंभव बनाउन सक्छौँ। हाम्रो व्यापारिक ग्राहकले गोपनीयताको साथ व्यापार गठबन्धन गर्ने अवसरको आनन्द उठाउँदछ र हाम्रो अनुभवी चाउफाइर्स द्वारा व्यवसाय र सार्वजनिक परिस्थितिबाट टाँस्न सक्दछ, न केवल भ्रमणहरू, तर केहि अदृश्य सुझावहरू साथै देखाउनुहोस्।
यूरोप को दिल मा सबै भन्दा आरामदायक शहर पर्यटन को लागि लिमोसिन सेवा
हाम्रो चालक तपाईं मात्र सजिलो मात्र होइन, तर पक्कै पनि, सावधानीपूर्वक र सुरक्षित रूपमा तपाईंको गन्तव्यमा। बासेल बाट, तपाईंको छनौटको शहरमा फरक परिदृश्यको खोजी उत्तम छ।
ज्यूरिखबाट लिमोसिन पत्ता लगाउनुहोस्
अण्डा तपाईं हाम्रो जर्मन लिमोसिन्स मध्ये एक बासेल सम्म ज्यूरिच बाट एक घण्टामा सान्त्वनापूर्वक आराम गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्व रोमन शहरमा मध्ययुगीन सडकको अलावा, यूरोपालेले सबैभन्दा आधुनिक वास्तुकला र स्विट्जरल्याण्डमा सांस्कृतिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो संग्रहले तपाईंलाई ल्यान्डस्मोज्यूम ज्यूरिचको परी कथा कथामा हेर्छ। आखिर तर कम से कम, ज्यूरिख मा Frauenmünster मा विश्व प्रसिद्ध च्याग्ले दाग-काँच खिडकी को हरेक आगंतुक को लागि बिल्कुल अविस्मरणीय छ।
तपाईं ज्यूरिखको लागि एक ठूलो खरीदारी अनुभवको साथ आफ्नो शहर यात्रा जोड्न चाहनुहुन्छ? एक राम्रो विचार! ज्यूरिख विश्वभरका आगन्तुकहरु संग यसको विशेष बुटीक, विशेषता पसलहरु र शीर्ष डिजाइनरहरु को पसलहरु संग लोकप्रिय छ। अरू क्रिस्टा डे कार्उज बीच, कपडा फ्रान्सलाइन, हन्स बी र कन्निक्स यहाँ घरमा छन् र कपडा, अंडरवियर र जूताको असाधारण डिजाइनको साथ आउँछन्। ज्यूरिखको स्विस क्यासिनो विभिन्न गेमहरू र टूर्नामेन्टहरूसँग रोमाञ्चक घटनाहरू पछिको आश्चर्यचकित हुन्छ। र ठूलो र सानो फुटबल प्रशंसकहरूको लागि ज्यूरिखले तपाईंलाई प्रसिद्ध फीफा विश्व फुटबल संग्रहालयलाई निम्तो दिन्छ।
लिमोसिन मा सिटी Mulhouse विले को यात्रा
फ्रांसीसी मुल्हाहाउस - बासेल र फ्रिब्रिगको साथ बासेल-शेयरहरूको आधा घण्टाको ड्राइभमा यूरोअन्तरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। हाम्रो धेरै व्यवसायी ग्राहकहरू नियमित रूपमा हाम्रो ट्राफिक सर्भिसले बासेल एयरपोर्टबाट अलास्साको व्यापारिक स्थानमा व्यावसायिक स्थानमा प्रयोग गर्दछ। त्रिभुवन क्षेत्रको शहर विशेष गरी 18 मा जित्यो। फ्रान्सेली औद्योगिक क्रांतिको अग्रगामीको रूपमा शताब्दीको यो कपडाका कारखानाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। 10.000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूको साथ, Peugeot Alsace मा सबै भन्दा ठूलो नियोक्ता हो। Mulhouse Ville ऐतिहासिक औद्योगिक स्मारकहरु र मध्ययुगीन चर्चहरु र मोचदार आदेश, फैब्रिक मुद्रण संग्रहालय र प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय Cité de l'ओटोमोबाइल को बीच एक अनंत विविधता को बदलन संग आश्चर्यजनक छ।
स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी र फ्रान्समा रहेका शहरहरूको अलावा, हामी पनि तपाईले अन्य शहरहरूमा पनि सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले हाम्रो वेबसाइटमा चयन गरिएका गन्तव्यहरूको सूची पाउनुहुनेछ, जहाँ तपाइँ हाम्रो एयरपोर्ट ट्राफिकको लागि मूल्यहरू पाउनुहुनेछ। हामी तपाईंको लागि तत्पर हुनुहुन्छ अनलाइन बुकिंग वा तपाईंको कल + 41 78 861 35 50 मा कल गर्नुहोस्।
मा चिन्ह लगाइयो: हवाई अड्डा शटल बेसल विमानस्थल शटल कार सेवा शहर विश्रामहरू
taxi.flughafen अप्रिल 6, 2017 अप्रिल 6, 2017 असंगठित कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
← BASELWORLD 2018 - ट्रांसफर सेवा बासेल संग यात्रा सहज